Dil Magaalada Muqdisho loogu gaystey haweeneey gudoomiye ku xigeenka ka aheyd degmada Wardhiigley – idalenews.com
Dil Magaalada Muqdisho loogu gaystey haweeneey gudoomiye ku xigeenka ka aheyd degmada Wardhiigley
Gudoomiye kuxigeenkii degmada Yaaqshiid Raxmo Dahir Siyaad ayaa galabta kooxo hubeysan ay ku togteen xaafada Juungal, iyadoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in kooxihii dilka ka dambeeya la qabtay.
Haweeneydan ayaa lagu dilay meel ku dhow hoygeeda, waxaana raga ku hubeysan bastooladaha ay rasaas kaga dhifteen qeybaha sare ee jirkeeda, iyadoo goobta ku qudh baxday.
Qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegaya in raga dilka ka dambeeyay markii ay baxsadeen ay ku baxeen ciidamo ka tirsan dowladda, lana soo qabtay, hase ahaatee warkaas ayaa ah mid wali aan kala cadeyn.
Gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Muxiyadiin Xasan Jurus ayaa xiriiro aan la sameynay ay inoo suura geli weyday, hase ahaatee waxaa la sheegay in isaga iyo Ciidamo uu wato ay gaareen goobtii lagu dilay Haweeneyda kuxigeenka u aheyd.
Dilkan ayaa noqonaya kii u horeeyay noociisa oo Mas’uul xil ka haya degmooyinka Gobolka Banaadir loo geysto, waxaana ay aheyd haweeneyda kaliya ee kuxigeen ka ah maamulada degmooyinka, marka laga reebo Gudoomiyaha degmada Wardhiigley oo ah Haweeney lagu magacaabo Deeqo C/qaadir.
Dhageyso: Gudoomiyaha Guddiga Ganacsatada Jubooyinka oo qabanqaabiyey kulankii Nairobi ka dhacey oo sheegay in Jubaland aysan cid gooni ah lahayn Soomaaliyana aysan ka go’aynin
Kulan 3 cisho ah oo Mombasa uga furmay AMISON, Dowlada Somalia, IGAD iyo AU